AnkapobenyPosté par Berïnson 2016-11-01 10:01
Araka ny tantaram-pivavahana katolika, ny 01 novambra dia andro nahatsiarovana ny olo-masina nodimandry efa any an-danitra. Ny ampitso, ny 02 novambra no niangona indray ry zareo hivavaka ho an'ny fanahin'ireo maty tsy mbola tafakatra any an-danitra. Saingy raikitra ho fetin'ny maty ny 01 novambra. Ao ny mamangy fasana, ao ny mamonjy fotoam-pivavahana, ao ny mahatsiaro ny havana na tapaka sy namana efa maty sy manokana minitra ho fahatsiarovana azy ireny.
Marina fa tsy voatery ho ny 01 novambra ihany vao mahatsiaro ny efa lasa nodimandry isika. Isaky ny lasalasa ny eritreritro mandinika ny fikororosiana tanteraka mahazo an'i Madagasikara dia miverina mitambolona any amin'ny taona 1975 foana ny saiko. Taona nanoloran'ny Jeneraly Ramanantsoa Gabriel ny Kôlônely Ratsimandrava Richard ny fahefana feno hitondra ny Tany sy ny Fanjakana, ho Filoham-panjakana sady Lehiben'ny Governemanta, Minisitry ny Fiarovam-pirenena sy ny Teti-pivoarana. Enina andro taorian'izay monja dia maty notifirina izy sy ny Mpiambina azy roalahy.
Minisitry ny "ala olana" no niantsoan'ny fokonolona ny Kôlônely Ratsimandrava taona vitsy talohan'ny nanolorana azy ny fitondrana sy ny nanekeny am-panetren-tena hoe: "Tsy hiamboho adidy aho, Mon Général". Izy mantsy no nivoy sy nanentana ny vahoaka momba ny Fokonolona. Nahazo namosa-kevitra an-kalalahana sy am-pilaminana tamin'ny Radio Madagasikara ny vahoaka malagasy manerana ny Nosy nifanakalo hevitra mivantana. Tsy mba nanavakavaka izy fa nandray am-pifaliana izay rehetra te-hifanakalo hevitra aminy momba ny Fiandrianam-pirenena. Ny fenitra nijoroan'ny Kôlônely Ratsimandrava hitondrana ny Tany sy Fanjakana dia ny "fanahy no maha-olona", fenitra miorim-paka amin'ny Fokonolona.
Nitety an'i Madagasikara ny Kôlônely Ratsimandrava hanatonana mivantana ny vahoaka Malagasy hanazavany ireo rafitra mifehy sy ifampifehezana natsangany. Tamin'izany dia efa fantany fa nisy ny olona nanao resaka ambadika hanapotehana io rafitra io na dia eo aza ny famelany ny varavaran'ny fifampiresahana hisokatra lalandava. Saingy nanoro hevitra sy nampisaina ny Fokonolona izy.
"Raha hanangana ny Fokonolona izao isika, dia hovantsika izany fandehan-javatra izany. Ny fomba hoentintsika dia toa izao: ireo olona hofidiana, dia hofidinareo tsirairay. Ka ianareo no hitsara araka ny fahalalanareo azy. Ny Governemanta tsy hanery anareo. Ary eo ireo manam-pahefana rehetra ireo, tsy hoterena ireo, tsy hisy hahazo baiko hoe tsy maintsy handany an-dRanona na Ranona, fa halalaka tanteraka ny safidy. Fa anjaranareo ny mikaroka ao anatin'ny Fokontany izay misy anareo ny hoe iza no olo-marina eto? iza no olona azo antoka? iza no azo ianteherana? na ho mafy na ho sarotra ny raharaha. Fa tsy ilay olona izay hanararaotra, hieritreritra ny hameno ny paosiny aloha, hanao izay fitapitaka rehetra izao; fa izay olona hitanareo kosa fa marina, mandeha amin'ny hitsiny lalandava, izany no hofidinareo. Ary iny olona iny, matetika aza, tsy mba hirehareha, satria tsy mba mahazatra antsika Malagasy loatra ity fampielezan-kevitra ity. Samy midera tena eo daholo: "tsy fantatrareo fa izaho no Ra-Anona, ianareo ireo tsy misy mitovy amiko, tsy misy mahay noho izaho ianareo, fa izaho ihany no hahavita ity raharaha ity!!" Tsy raha fomba teto amintsika Malagasy izany. Ary nandritra ny 70 taona izay, be dia be ireo olona izay azo heverina fa olomangam-pirenena, tsy mba nandroso teny, tsy mba nahazo toerana, satria tsy tiany izany hoe midoka tena izany. Ireny no tokony hotadiavinareo hitondra amin'izao fotoana izao fa be loatra ny zavatra izay manahirana antsika. Ka raha toa ka amin'izao fotoana izao indray isika no mbola ho voafitaka, mbola ho diso lalana indray dia tsy fantatra hoe inona no zavatra hihatra amin'ity firenentsika ity!"
Toy izany ny kabary nataon'ny Kôlônely Ratsimandrava tao Anjiro Moramanga rehefa nanao antso avo izy mba hiray hina, hiara-hiasa sy hifanampy ny isam-batan'olona ao amin'ny Fokontany. Toy izao no namaranany io lahateniny io: "Fa raha ohatra ka tsy misy ny firaisankina, tsy misy ny fiaraha-miasa, dia tsy misy akory ny tena hoe fahafahana. Ny fahaleovantena na ny fahafahana dia zavatra mora raisina, sady zavatra mora miporitsaka sy very koa. Anjarantsika amin'izao fotoana izao, tompokolahy sy tompokovavy, no mitana azy ary tsy mamela azy intsony. Misaotra tompoko".
Saingy maty ny Kôlônely Ratsimandrava. Maty niaraka tamin'izay ny herin'ny Fokonolona. Niporitsaka sy very ilay fahaleovantena sy ilay fahafahana. 40 taona mahery aty aorian'ny nahafatesany dia mbola kofehy manara-panjaitra foana ny vahoaka malagasy. 40 taona mahery aty aorian'ny namonoana azy dia mbola faty entina foana isika.
- Loharano: Ny fokonolona araka ireo kabary nataon'ny Kôlônely Richard Ratsimandrava eran'ny Nosy 1973-1975
AnkapobenyPosté par Berïnson 2015-12-24 11:11
Ara-tantara dia tsy mba nankalaza Noely ny Malagasy. Ny vahiny nampiditra ny fivavahana kristiana tany Madagasikara no nitondra ireo fety kristiana isan-karazany, anisan’izany ny Noely, ny 25 desambra, andro nifanarahana ho andro nahaterahan’ny Mesia. Nanjary fomba fanao mahazatra àry, ny mandeha mivavaka maraina ary miara-misakafo amin’ny tapaka sy namana, na ny fianakaviana akaiky rehefa tonga ny Noely. Zatovo sy tanora maro koa no mandany fotoana mahafinaritra miaraka amin’ny namany avy eo.
Fomba hafa ankalazana ny Noely koa ny fifanakalozana fanomezana. Na tsy mamela aza ny toe-javatra indraindray dia vatra ny midi-kizo mividy zavatra tsy ho novidiana mihitsy andro andavanandro, andro tsy Noely: sakafo, fitafiana, haingo, fanaka sy ny sisa tsy ho voatanisa. Ny antony angamba dia mba hamalifaliana tena andro iray ao anatin’ny taona. Na koa mba hahitan’ny olona fa maharaka fety ny tena. Atatatata ny mozika, ararak’ompana ny zava-pisotro mahamamo, azo ekena ny toetra sy fitondran-tena tsy ho natao andro mahazatra. Satria Noely. Satria fety.
Mifanohitra amin’izany rehetra izany ny noelin’ny kamboty nohirain’Ny Nanahary: ao an-trano bongo lavitry ny haingo mamirapiratra isan-karazany, vary soa sy kitoza lavitry ny hena sy vorona mafilotra, rom-patsa sy sakay lavitry ny saosy matsiro isan-karazany, tanin’afo sy sentosento ary ranomaso lavitra ray aman-dreny. Noely mahonena!